IMEX America ndicho chiitiko chekutanga chepasirese kuvhurwa mushure meUS kurambidzwa kufamba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » IMEX America ndicho chiitiko chekutanga chepasirese kuvhurwa mushure meUS kurambidzwa kufamba
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
IMEX America ndicho chiitiko chekutanga chepasirese kuvhurwa mushure meUS kurambidzwa kufamba.
Kwangosara mavhiki maviri kuti aende kusvika IMEX America, mazana evamwe vatengi vepasirese, varatidziri uye nyanzvi dzeindasitiri vakasimbisa kuuya kwavo.
Vanopfuura zviuru zvitatu vatengi vepasirese vakanyoreswa kuenda kuIMEX America.
Pamusoro pe2,200 makambani anoratidza, kubva kunzvimbo, nzvimbo, mapoka emahotera uye vanopa tekinoroji, vanosimbiswa zvakare.
Kuuya kumusha kweindasitiri iyi chimwe chikonzero chekupemberera pazviitiko zvemanheru zvinosanganisira Saiti Nite iri kuitika kuResorts World itsva, chiitiko cheMPI Foundation Rendezvous chiitiko kuDrais uye EIC Hall yeVatungamiri paMGM Grand.
"IMEX America ndicho chiitiko chekutanga chepasirese kuvhurwa kana kurambidzwa kwekufamba kweUS kwasimudzwa muna Mbudzi 8, uye nekuunza pamwe chete chikamu chikuru chepasi rose neUS bhizinesi zviitiko munharaunda pashoo, isu tinotarisira kuvhura nzira yekuvandudzwa kwechikamu uye. kupora.” Carina Bauer anotarisa kumberi kune IMEX America, inoitika Mbudzi 9 - 11 muLas Vegas.
Kwasara mavhiki maviri chete kusvika IMEX America, mazana evamwe vatengi vepasi rose, varatidziri uye nyanzvi dzeindasitiri zvino vasimbisa kuuya kwavo.
Vanopfuura 3,000 vatengi vepasi rose vakanyoreswa kuti vauye.
Yakawedzera muratidziri mutsara-up
Chiziviso chechangobva kuitika chekuUS chakasimbisa kuvepo kweEurope pashoo kubva kuvaratidziri vanosanganisira Holland, Ireland, Italy, Scotland, Scandinavia neSpain. Iyo show floor inotenderera kumativi mana ese epasi neAustralia, Korea, Japan, New Zealand neSingapore pakati peAsia-Pacific nyika, pamwe nemamwe mareavyweight epasi rose anosanganisira Dubai, Morocco neSouth Africa. Vanobatana neUS, Canada neLatin America kuti vagadzire kusvika kune dzimwe nyika. Idzi nzvimbo dzepasirese dziri kuratidza kufarirwa, neakawanda evaratidziri masheti achizadza nekukurumidza mushure mekunge madhayari atanga.
Iyo Tech Hub nharaunda yeshow floor ndiyo imwe yeakakura kwazvo, ichiratidza huwandu hwakawanda hwemakambani etekinoroji uye ichiratidza kuti chikamu ichi chakakurumidza sei kubuda mumakore mashoma apfuura. Makambani anosanganisira Aventri, Bravura Technologies, Cvent, EventsAir, Fielddrive BV, Hopin, MeetingPlay, RainFocus uye Swapcard.
Mugwagwa unoenda kuMandalay Bay
Yakabhadharwa se 'kuuya kumba kweindastiri', show yegore rino ichave kusangana kwakakosha: kwete chete iyo yechigumi edition IMEX America, show inewo imba itsva - Mandalay Bay. Kuronga kuratidzwa munzvimbo itsva kwabvumira kuti IMEX timu itarise patsva dhizaini yeshoo yacho uye kuunza mamwe maficha akasarudzika anoita mari. Mandalay Bayzvinokwezva uye kuwedzera ruzivo rwevanopinda. Imwe yeiyi i'Relaxation Reef, iyo ichaita chirongwa chezvehutano munzvimbo yeShark Reef Aquarium, kumusha kune zvinopfuura zviuru zviviri zvezvisikwa zvemugungwa. Zvimwe zvezvidzidzo zvemahara pashow zvichaitikawo munzvimbo dzinoshamisa dzeMandalay Bay.
Kudzidza kwakagadzirirwa kumatunhu ese
Iyo inokurudzira, yemahara yekudzidza chirongwa ichimhanya mushow yese haifanirwe kupotsa, uye inotanga paSmart Muvhuro, inofambiswa neMPI, ichiitika musi wa8 Mbudzi, zuva rakapfuura. IMEX America inotanga. Dr Shimi Kang vanobva kuYunivhesiti yeBritish Columbia vachapa Smart Monday keynote, vachiratidza nzira dzichangoburwa dzetsvakiridzo dzekuchinjika, hunyanzvi, kubatana uye kubudirira kwebhizinesi kusingaperi.
Zvikamu zvakatsaurirwa zvemapoka eindasitiri akasiyana zvinobvumira vanopinda kuti vagadzirise ruzivo rwavo rweSmart Muvhuro. Pane dzidzo uye networking yevakuru vemakambani chete ku Executive Meeting Forum - yakagadzirirwa vakuru-vakuru vemakambani kubva kumakambani eFortune 2000 - uye iyo itsva Corporate Focus - yakavhurika kune vese vanoronga kubva kumakambani pamatanho ese. Vatungamiriri vesangano vanogona kubatana nekudzidza nevezera ravo paAssociation Leadership Forum, yakagadzirwa neASAE.
Zuva rega rega rinotanga neMPI keynote. Movers uye shakers vanobva kunze kweindasitiri yezviitiko zvebhizinesi mumwe nemumwe achaunza yavo yakasarudzika yepasirese maonero kuratidzwa kusanganisira muvambi wepasirese dhizaini nharaunda uye nharaunda.
Iyo Inspiration Hub yave zvakare kumusha kuratidza dzidzo yepasi, ichipa hurongwa hwakazara hwemikana yekudzidza inogadzirisa zvinodiwa nebhizinesi uye hunyanzvi zvinodiwa zvinotsanangura kunopera kwa2021. Zvidzidzo zvinofukidza Kugadzira mukukurukurirana; Kusiyana uye kuwanikwa; Innovation uye tech; Bhizinesi kudzoreredza, Kondirakiti nhaurirano, Personal branding uye Sustainability.
Pemberera kuuya kweindasitiri
Nepo pasi peshow ndiyo hubhu yebhizinesi nekudzidza, iyo IMEX America chiitiko chinoenderera mhiri kweLas Vegas. Kushanya kweBespoke kunopa kudzika kweguta kungave chikafu chakanakisa, zviitiko zvisinganzwisisike kana nzira yemukati yenzvimbo mbiri dzemifananidzo: Caesar's Palace neMandalay Bay. Kuuya kumusha kweindasitiri iyi chimwe chikonzero chekupemberera pazviitiko zvemanheru zvinosanganisira Saiti Nite iri kuitika kuResorts World itsva, chiitiko cheMPI Foundation Rendezvous chiitiko kuDrais uye EIC Hall yeVatungamiri paMGM Grand.
IMEX America inoitika 9 - 11 Mbudzi kuMandalay Bay muLas Vegas neSmart Muvhuro, inofambiswa neMPI, musi wa8 Mbudzi.